तिथि मेरो पत्रु » एक पहिलो तारीख लागि ड्रेसिंग
पछिल्लो पटक अद्यावधिक गरिएको: Mar. 27 2020 |4मिनेट पढ्न
हामी एक महान् फेसन षड्यन्त्र सबै सिकार छौं: निगम महिलाहरु उनि लगाउने के को रूप मा एक सुराग मिल्यो छैन विश्वास गर्न बनाइँदैछ! बदलाव र शैली सल्लाह टेलिभिजन शो को proliferation र लोकप्रियता तपाईं कसरी अरू बताउन सक्नुहुन्छ? हामी shrieking हाम्रो आमा देखि जानुभएको, 'तपाईं कि मा घर छोडेर गरिरहनु भएको छैन!’ सोझो महिला हुनुको फैशन 'केबल शैली शो द्वारा punk'd गर्न. यो सबै अवान्छित, अझै 24/7 सल्लाह हामीलाई हाम्रो वार्डरोब र हाम्रो क्षमता दोस्रो अनुमान सबै-महत्त्वपूर्ण घटना लागि तैयार गर्न छ: पहिलो तिथि. तर तपाईं साँच्चै केटा अर्को ढोका सोचाइ एउटा सिद्ध पोशाक चाहिन्छ?
म लुगा स्त्रीले बनाउन छैन वा मानिस MANOLO Blahniks मा एक महिला को लागि एडी भन्दा टाउको गिर कारण विश्वस्त छु. म पहिलो केल्विन क्लाइन गर्मी पोशाक मा उनको देखे मैले एउटा मानिस म उनको प्रेम गरे भन्न 'सुन्न अझै गर्यौं . . . तपाईं एक सम्झना, मह, पछाडि तल बटन संग।’ बढी सम्भावना उहाँले आफ्नो पुरानो बटन तल शर्ट को एक मा तपाईं हेरेर चालू भइरहेको सम्झना.
तैपनि, म धेरै पहिले-मिति अनुभव छ र म 'सिद्ध लागि देख मेरो closets मार्फत panicked pawings को मेरो भाग थियो गर्नुभएको’ त्यस प्रारम्भिक साँझ लागि टुकडी. म पनि आफ्नो प्रारम्भिक hookups मा जोडे नियालेर वर्ष बिताए गर्नुभएको, र मेरो Fashionista विगतका संग संयुक्त, म एक प्रथम मिति लाउने सफलता को लागि केही सामान्य अर्थमा नियम साथ आए.
1. कालो लगाउने छैन. त्यो क्लब मा पर्याप्त पहिले नै गाढा छ, रेस्टुरेन्ट वा चलचित्र तपाईं शायद मा हावा छौँ. आफ्नो मिशन बाहिर खडा छ, आफ्नो वरपर संग मिश्रण छैन. यसबाहेक, एकल मान्छे को मेरो अनौपचारिक पोल तिनीहरूले रंग पुरा तरिकाले लागिपरेको र बोरिंग भनेर फेला.
2. आफ्नो कोठरी लगाउने छैन. यो तपाईं बस मल देखि प्रतिरोध गर्न सक्ने सुन्दर स्वेटर तल आफ्नो मनपर्ने शर्ट तह र चेन र मोती को डोरी तिनीहरूलाई ढाक्न समय छैन. कि धेरै आँखा कैंडी संग, आफ्नो मान्छे जहाँ ध्यान केन्द्रित गर्न सोचिरहनुभएको समस्या हुन सक्छ. तपाईं एक व्यक्तित्व प्रतियोगिता जित्न गर्न खोज्नु, छैन 'परियोजना रनवे।’
3. भनेर र्याप गरिएको छ जस्तो तपाईंलाई हेर्न बनाउँछ केहि देखाउनका छैन, मुड वा छलछामको गाँठो मा गाँसिएको. गलत-तरिका यो मात्र सुराकी आफ्नो भाग मा सोच, जस्तै, 'त्यो कसरी प्राप्त-अप मा प्राप्त गरे . . . र म कसरी बाहिर उसलाई मानिन्छ छु?’ यसबाहेक, कसैको व्यक्तिगत दासत्वबाट कल्पनामा को आशय बाहिर फालिएको पहिलो मिति मा तरिका पनि धेरै जानकारी गठन.
4. को कमर माथि ठूलो देख ध्यान केन्द्रित. संभावना, साँझ को अधिकांश तपाईं तल बसिरहेका गरिने. एक राम्रो चित्र प्रस्तुत तपाईंको स्रोतहरू खर्च उहाँले देख्न सक्नुहुन्छ कि. उहाँको बारेमा कुरा गर्न केही दिन: ठूलो रंग मा एक ब्लाउज, भनेर बन्द आफ्नो काँध देखाउँछ राम्ररी गरे शीर्ष, वा jeweled ज्योति पकड कि कुण्डल. उहाँले फैशन आवश्यक छैन थाहा हुन सक्छ, तर अधिकांश मानिसहरू तिनीहरू रंग र आकार मा के मनपर्छ थाहा: तपाईं त्यस रंग, आफ्नो घटता मा शर्ट को आकार.
5. रंग अँगालेको. तपाईं एक Technicolor छप मा पोशाक छैन, तर आफ्नो अनुहार वरिपरि सानो रंग आफ्नो आँखा र आफ्नो मुस्कान बाहिर ल्याउनेछ. सही छाया उहाँले भन्छन् खाना वा केही देखि बिरामी महसुस हुँदा तपाईं गुलाबी लगेगा. पुरुष रातो प्रेम – दमकल बाट चेरी टमाटर गर्न धनी रातो रास्पबेरी गर्न. Sensuality र sophistication माग तपाईं आफ्नो छाला टोन लागि उपयुक्त छाया चयन कि. एक हस्ताक्षर छाया अपनाउने. नजिक र व्यक्तिगत अप प्राप्त गर्न धनी रंग प्रयोग.
6. फिट र चापलूसी. आकार चिन्ता नगर्नुहोस्. फिट ध्यान केन्द्रित. जब पोशाक तपाईं मा छ यो तपाईं र तपाईंको काल्पनिक आकार फिट हुनुपर्छ. वास्तविक हुन: हामी सबै बैग हामी पूरा गर्न चाहँदैनन् र रोल हामी इच्छा टाढा रोल थियो छ. महत्वपूर्ण कुरा भेष को कला मास्टर र आफ्नो सम्पत्ति लगानी गर्न छ. जब कि पोशाक भुइँमा झूट छ, म तपाईंलाई ग्यारेन्टी उहाँले ट्याग मा आकार देख हुनेछैन.
7. अन्त, एक पहिलो तारीख छैन ठूलो प्रकट जस्तै हो. आफ्नो सबै भन्दा राम्रो सुविधाहरू Flaunt, तर सबै तिनीहरूलाई को एकैचोटि. एक plunging neckline एक जांघ उच्च स्कर्ट संग प्रतिस्पर्धा गर्न आवश्यक छैन. कम बढि छ. कम तपाईं अब देखाउन, तपाईंले पछि लागि हुनेछ थप.
यो जीवन चोरी: पोशाक डायरी
मेरो साथी हीदर उनको मनपर्ने पोशाकहरू मा आफु को POLAROID तस्वीर राख्छ. त्यो सजिलै त्यो सम्झना भन्दा बढी लुगा भइरहेको गर्न स्वीकार्छन्, त्यसैले त्यो उनको फैशन सूची को एक रेकर्ड र के राम्रो देखिन्छ उनको मा गरिहाले छ. त्यो किनमेल गएपछि त्यो प्रेरणा र संयमता लागि साथ केही फोटो लिन्छ. तपाईं उनको विचार एक कदम अगाडी लिन र आफ्नो मनपर्ने लग कोटिबद्ध सक्छ. जो आफ्नो मनपर्ने साक्षात्कार सुट छ नोट, तपाईं एक लाख रुपैया जस्तै महसुस र सँगै पहिलो तारीख शैलीहरू को सपना संग्रह राख्न बनाउँछ जो पोशाक तल jot.
यहाँ तपाईं आफ्नो फैशन व्यावहारिक ज्ञानयुक्त भन्ने कुरामा विश्वस्त हुनुहुन्न मामला मा केही शैली गाइड छन्. साथै, तपाईं www.thelastsinglegirlintheworld.com मा थप हाउटे सुझाव पाउन सक्नुहुन्छ.
टुट्नु गर्न कहाँ संग संसारको फैशन क्यापिटल मा प्रो जस्तै पसल 2005 विभिन्न शहर को लागि गाइड: लास भेगास, न्यूयोर्क शहर, पेरिस, इटाली (फ्लोरेन्स, रोम, मिलान), सान फ्रान्सिस्को, लस एन्जलस र लन्डन
टेलिभिजन गृहकार्य: लगाउन छैन के को केही एपिसोड हेर्न. यो ध्यानलाई छ र तपाईं म लाउनु हुँदैन थियो 'यसो भन्दै आफैलाई सान्त्वना दिन सक्छ!’ या त ब्रिटिश वा अमेरिकन संस्करण तपाईं आफ्नो कोठरी आक्रमण र आफ्नो शैली पुनर्विचार गर्न साहस दिनुहुनेछ.